I-Topiramate powder (97240-79-4) hplc =98% | I-AASraw Fat ilahlekile
/ iimveliso / abanye / Topiramate powder
SKU: 97240-79-4. Udidi: abanye
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-massar ye-Topiramate powder (i-97240-79-4), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Topiramate powder ividiyo
I-Raw Topiramate powder ezisisiseko
igama: I-Topiramate powder
I-molecular Formula: C12H21NO8S
Isisindo somzimba: 339.36
I-Raw Topiramate powder ekujikelezweni kwesisindo somzimba
I-Topiramate powder, i-Topomax, i-Qudexy XR, i-Topamax, i-Topiragen, iTrokendi XR
Usetyenziso oluninzi lwe-Topiramate powder
I-Topiramate powder yisilwanyana esisemthethweni esisetyenziselwa ukuthintela ukutshatyalaliswa kwesithuthwane. Liyingozi yokulwa nesifo okanye isifo sokuxhatshazwa. Isetyenziswe ikakhulu kwizigulane ezingalawulwa ngamanye amayeza anesifo. Mayelana ne-1 kuma-4 aseMerika afunyanwe ukuba nokuhluthwa zixhatshazo ezichasayo unyango kunye nezinye izidakamizwa ezikhuselayo. I-topiramate powder nayo ikhusela imithwaba ye-migraine.
Ukuqukulwa kungenxa yomsebenzi ongaqhelekanga ("ukudubula") kweemvilini engqondweni, kwaye umsebenzi ongavumelekanga usasazeka kwiincinci ezincinci okanye ezinkulu. Nangona i-Topiramate powder yeendlela ezichanekileyo zesenzo aziwayo, uphando lwezenzululwazi lubonisa ukuba lungatshintsha i-neurotransmitters ngaphakathi kwengqondo. I-neurotransmitters yile michiza eyenziwa yintsholongwane kwaye isebenzise ukunxibelelana namanye amavolonti asondeleyo. Ngokutshintshwa kwemveliso okanye isenzo se-neurotransmitters, i-Topiramate powder iyakunqanda umsebenzi ongaqhelekanga weentsholongwane ezibangelwa ukuxhwala okanye ukuthintela umsebenzi ongaqhelekanga ukusasazeka kwamanye amazinyo. Olunye uphando lubonisa ukuba i-Topiramate powder iyakunciphisa iiswini ngokuthe ngqo (oko kukuthi, kungekhona ngokutshintsha ii-neurotransmitters) kwaye zenze kube lula ukuba umlilo.
Landela umyalelo wakho ugqirha. Biza ukuba unemibuzo. Ngokuqhelekileyo, ugqirha uya kukuxelela ukuba uqale ngokuthatha i-25-milligram tablet rhoqo ngamaxesha ngamaxesha. Emva kwexesha elithile, ugqirha unokwandisa i-dosage ukwenzela ukuba ulunge kakuhle ulawulo lwakho. Ngenxa yokuba i-Topiramate powder ngokuqhelekileyo ithathwa kabini ngosuku, abantu abaninzi banceda bazikhumbule ngokuyithatha ngesidlo sakusasa nakudla. Buza ugqirha ukuba wenzeni ukuba uyakhohlwa ukuthatha umthamo.
Zomibini iifom ze-Topamax zinokuthathwa ngokutya okanye ngaphandle kokutya, kodwa kukulungele ukuhlala ngokuvumelana nosuku nosuku.
Qaphela ukuba ugqirha ubhala umyalelo omtsha usebenzisa uhlobo oluthile lwepilisi. Umzekelo, ukuba usebenzise iipilisi ze-25-mg kunye nomyalelo omtsha wee-tablet ze-100-mg, qaphela ukuba usebenzisa inombolo echanekileyo. Ungazenzeki ngokuzenzekelayo ukusebenzisa inombolo efanayo yeepilisi njengaphambili. Qinisekisa ukuba uyazi ukuba yeyiphi ipilisi yefayile echanekileyo.
Ukuba uthabathe amacwecwe, gwinya nganye. Musa ukuluma. (Kuya kuba buhlungu.)
Iifomsile eziphambanisayo yindlela elula yokunika i-Topamax kubantwana nakwabanye abanenkathazo yokugwinya iipilisi. Iifomsules zinokuginywa ngokupheleleyo, kodwa ngokuqhelekileyo ziyavulwa kwaye iziqulatho zifafazwe kwi-teaspoon yokutya okuthambileyo njenge-applesauce, i-custard, i-ice cream, i-oatmeal, i-pudding, okanye i-yogurt. Nantsi inkqubo:
Fumana ipoyipoon yokutya ilungile.
Bamba i-capsule egciniweyo ukuze ufunde igama elithi "TOP."
Bamba i-capsule phezu kokutya kwaye uphawule isahlulo esicacileyo se-capsule.
Nciphisa konke okuqukethwe kwe-capsule ekudleni.
Sula yonke i-spoonful kwangoko ngaphandle kokuyihlafuna. (Kuya kukhwankqisa xa kuthengwa.) Ukusela amanzi okanye enye i-fluid ngokukhawuleza kunokunceda uqinisekise ukuba zonke ukutya zigwinyiwe. Ungalokothi ulondoloze nayiphi na iyeza edibeneyo kunye nokutya ukusebenzisa emva koko.
Qinisekisa ukuthatha kuphela isixa ogqirha wakho akuxelela ukuba uthathe.
Isixwayiso kwi-Raw Topiramate powder
Imiphumo echaphazelekayo ye-Topiramate powder yile:
utshintsho kwimboniselo okanye
ukukhwaza okanye ukuvalelwa kwezandla kunye neenyawo,
ubunzima ngememori, kunye
Ezinye iziphumo ezichaphazelekayo ziquka:
kuncipha ukujuluka, kunye
ukwanda kweqondo lomzimba ..
I-Topiramate powder ingabangela ingozi kumntwana ongakazalwa, kodwa ukuxhwaba ngexesha lokukhulelwa kungalimaza kokubili umama nosana. Tshela ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuba ukhulelwe ngelixa uthabatha i-Topiramate powder ngenxa yokubamba. Ungaqali okanye uyeke ukuthatha i-Topiramate powder ngexesha lokukhulelwa ngaphandle kweengcebiso zogqirha.
Funa ingqalelo yonyango ngokukhawuleza ukuba unenguqu ngokukhawuleza kwimbono okanye intlungu ecaleni okanye ngasemva kwamehlo. Ezi zinokuba yimpawu zokuqala zempembelelo enzulu kwaye isigxina kwimibono yakho.
Ungayeki ukusebenzisa i-Topiramate powder ngaphandle kokuqala ukuthetha nodokotela wakho, nokuba uziva kakuhle. Usenokuba unyuke xa uyeka ukusebenzisa i-Topiramate powder ngokukhawuleza. Unokudinga ukusebenzisa ngaphantsi nangaphantsi phambi kokuba unqamle imithi ngokupheleleyo.
Xhagamshelana nogqirha wakho ukuba ukuxhatshazwa kwakho kukubi kakhulu okanye unako rhoqo xa uthatha i-Topiramate powder.
I-Topiramate Raw Powder
I-Raw Topiramate powder Marketing
Indlela yokuthenga i-Topiramate powder kwi-AASraw
I-Topiramate Raw Powder Recipes:
Indlela yokusebenzisa i-Topiramate powder ye-Weight Loss?